भदौ २६ गतेको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने ओली दाहालबीच सहमति – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारभदौ २६ गतेको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने ओली दाहालबीच सहमति
भदौ २६ गतेको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने ओली दाहालबीच सहमति
१ पुष २०७७, बुधबार काठमाडौँ – नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भदौ २६ गते स्थायी समितिले गरेको निर्णयकै आधारमा अघि बढ्ने सहमति भएको छ। स्थायी समितिको बैठक अघि दुई नेताबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा भदौ २६ पछि भएका सबै विवाद अन्त्य भएको घोषणा गर्दै त्यसकै आधारमा अघि बढ्ने सहमति भएको हो। दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिलाई ओली र दाहालले स्थायी समितिलाई जानकारी गराएका छन्।
नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पार्टीभित्रको विवाद अन्त्यका लागि फेरि नाटकीय ढंगले चारबुँदे सहमति भएको छ। दुई अध्यक्षबीच गत भदौ २६ गते स्थायी समितिले गरेको निर्णयमा फर्किने र त्यसका लागि चार बुँदामा आधारित भएर अघि बढ्ने सहमति जुटेको हो। यसलाई दुई अध्यक्षले जारी स्थायी समिति बैठकमा जानकारी गराएका छन्। स्थायी समिति बैठकअघि दुई अध्यक्ष छलफलमा जुटेका थिए। दुई नेताबीच भएको सहमतिअुनसार अब दाहालले सचिवालयमा पेश गरेको आरोपत्र र ओली पेश गरेको जवाफीपत्र फिर्ता गरेर संयुक्त प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ।
यस्ता छन् ओली र दाहालबीच बुधबार भएको चार बुँदे सहमति- १.प्रचण्डको आरोपपत्र र ओलीको जवाफीपत्र फिर्ता हुने २. संवैधानिक परिषद सबन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने ३. संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने हस्ताक्षर अभियान स्थगित हुने, ४. आगमी बैठकमा ओली–प्रचण्डको संयुक्त प्रस्ताव लैजाने